RW Rooble oo soo saaray Amarro ka kooban 9 Qodob oo ku saabsan Maamulka Doorashada (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. RW Rooble oo soo saaray Amarro ka kooban 9 Qodob oo ku saabsan Maamulka Doorashada (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble War kasoo saaray ayaa war kaso osaray go’aanka ka soo baxay Guddiga Doorashada ee Heer Federaal oo lagu laalay laba kursi oo lagu doortay Magaalada Baydhaba, kana tirsanaa xildhibaannada Gollaha Shacabka.
Rooble ayaa soo dhaweeyay go’aanka ka soo baxay Guddiga Doorashada ee Heer Federaal, wuxuuna ku booriyey Guddiga Xallinta Khilaafaadka in iyaguna ay waajibaadkooda u gutaan si caddaalad ah oo waafaqsan Heshiisyada iyo Habraacyada doorashada ee laga soo gudbiyay cabashooyinka.
War-saxaafadeedka Rooble ayaa sidoo kale lagu caddeeyay in mas’uuliyadda hoggaaminta Doorashada ay leeyihiin Golaha Wadatashiga ee isugu hoggaamiyo, isla markaan ay madax bannaan yihiin Guddiyarada Doorashada.
Ra’iisal wasaaraha ayaa sheegay inuu magacaabayo wakiilo u qaabilsan dhaqdhaqaaqyada Doorashada oo warbixiino joogto ah siiya, isagoo xoojinayaa Doorka la socodka iyo u kuurgalista daahfurnaanta Doorashooyinka ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Rooble ayaa faray Gudiyada Doorashada 9 Qodob oo ku saabsan Habraaca Doorashada oo kala ah:
Ra’iisul wasaaruhu wuxuu faray Guddiyada Maamulka Doorashooyinka in ay qaadaan talaabooyinka soo socda.
1- Ka hor inta aan la qaban kursi kasta ee Golaha Shacabka waa in la cadeeyo, la diiwaangaliyo, lana shaaciyo Magacyada Xubnaha Guddiga soo xulista Ergada ee ka kooban Duubabka/Caaqilada iyo Bulshada Rayadka ah ee Beelaha/Jufooyinka Kursiga iska leh.
3- Soo xulista ergada waxaa si buuxda ugu madaxbanaan Duubabka/Caaqilada iyo Bulshada Rayadka ah ee Beesha/Jufada leh Kursiga lagumana faragalinkaro.
Previous articleKuraas lagu doortay Baydhaha oo Sharci-darro laga dhigay iyo Doorashada oo Dib loo qabanayo (Akhriso)
Next articleGuddiga Doorashooyinka oo u jawaabay Midowga Musharixiinta “Loo joojin maayo Doorashada..”